Billie Eilish wuxuu kor u qaadayaa codka muusikada Apple Music | Waxaan ka imid mac
Billie Eilish wuxuu kor u qaadaa codka muusikada Apple Music
Tony Cortes | | Apple Music
Bishii Maajo Apple waxay ku dhawaaqday inay ku dartay codka «Tayada CD-ga»Iyo codka maqalka ee Apple Music. Isticmaalayaasha nala socodsiiya horumarka farsamada ayaa durba ka war haya warka, laakiin laga yaabee in inta badan isticmaaleyaasha Muusikada Apple aysan weli ogaan.
Haddaba Apple ayaa shaqaaleysiisay heesaaga Billie Eilish si kor loogu qaado astaamaha maqalka cusub ee Apple Music. Wuxuuna ku sameynayaa albumkiisa cusub "Happier Than Ever."
Fanaanada caanka ah ee reer Mareykan Billie Eilish ayaa hal mar sameysa xayeysiin laba jibaaran. Dhinaca kale, laga soo qaaday albumkiisa cusub «Ka Farxad BadanaaDhanka kale, maqalka cusub ee lumay iyo astaamaha dhawaaqa Dolby Atmos ee ay bixiso Apple Music.
Albaabka cusub ee heesaha ayaa laga heli karaa Apple Music iyada oo lagu taageerayo tayada maqalka ee aan lumin, Dolby Atmos oo leh maqal baaxad leh, sidoo kale waxaa lagu calaamadeeyay «Apple Digital Master«.
Iyada lafteeda ayaa kugu martiqaadeysa inaad dhageysato heesaheeda cusub iyada oo loo marayo codka Apple Music uu ku siinayo, iyada dhexdeeda fiidiyow xayeysiis ah. Dhegayso codka hareerahaaga. Dhageyso Billie albumkiisa cusub “Happier Than Ever” oo leh Codka Maqalka on Apple Music »ayaa leh dhiirrigelinta.
Bishii Maajo ee la soo dhaafay, Apple waxay ku dhawaaqday maqalka aan khasaaraha lahayn, iyo sidoo kale Dolby Atmos iyada oo leh Spatial Audio waxaa lagu daray Apple Music. Astaamahan ayaa la siidaayay bishii Juun, tan iyo markaasna, waxaa jiray maktabad heesaha oo sii kordheysa iyadoo la adeegsanayo farsamooyinkan cusub.
Apple waxay ballanqaadday in maktabaddeeda oo dhan ay ka soo muuqan doonto astaamahan maqalka ee lumay ee cusub Dhamaadka sanadka, laakiin sidoo kale waxay ku xiran tahay fannaaniinta inay bartaan oo abuuraan muusig taageero maqal oo heer sare ah. Magacyada waaweyn sida Taylor Swift, The Beatles, Lady Gaga, Ariana Grande, iyo Billie Eilish lafteeda ayaa leh albumyo leh noocaan cusub ee maqalka 3D ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Music » Billie Eilish wuxuu kor u qaadaa codka muusikada Apple Music
Zoom wuxuu ku darayaa shaqada habka diiradda si loo yareeyo carqaladaha
1Password wuxuu ku dhawaaqayaa nooca 8 oo leh qaab garaaf ahaan dib loo habeeyay